Tupu iwebata akara ọnụọgụ kọmputa (CNC), usoro nrụpụta gụnyere ọrụ mmadụ siri ike, nrụpụta ogologo oge na-enweghị isi, mmefu nke ihe, na njehie jupụtara. Taa, teknụzụ emeela ka usoro mmepụta ihe dịwanye mma.
Iwebata nke CNC machining teknụzụ na-enye a dị elu nke pụrụ ịdabere, na-eme iterative Filiks ọzọ akpaka. Ma, gịnị bụ CNC machining? Kedu ngwaahịa ndị nwere ike site na teknụzụ CNC? Olee otú CNC machining ọrụ, na nke ihe nwere ike ji mee ihe na n'ichepụta Filiks na-ejiIgwe CNC?
Ihe ederede a bu ihe omimi miri emi bu ihe CNC bu, na isi ihe di na usoro a. Anyị ga-atụle uru nke n'ichepụta CNC karịa nrụpụta ọdịnala, yana onyinye CNC na arụpụta ọgbara ọhụrụ.
Anyị ga-elekwa anya sọftụwia CNC. N'ikpeazụ, anyị na-egosipụta ihe achọrọ n'aka ndị chọrọ ịzụ ka ha bụrụ ndị ọrụ CNC, ma tụlee ihe ndị ga-eme n'ọdịnihu n'ụwa nke igwe CNC.
Nkọwa okwu CNC na-anọchi anyaKọmputa Number Number. CNC machining bụ subtractive usoro na-agụnye na-eke omenala ekara aghụghọ site na workpiece site na kọmputa njikwa. Usoro a na - egosipụta na a rụpụtara ngwaahịa ahụ site na ịpịpụ ihe na mpempe akwụkwọ kama ịtinye ihe iji mepụta ngwaahịa.
CNC machining nwere ike kọwara dị ka a n'ichepụta usoro mere site na ígwè ọrụ na-. Usoro a mere ka enwee ike ịbawanye arụpụta n'ihi na igwe nwere ike na-agba ọsọ na akpaghị aka na-enweghị mkpa onye ọrụ ịdị na-abịa mgbe niile.
Gịnị bụ akụkọ ihe mere eme nke CNC machining?
Onye bu ụzọ nke CNC bụ ọnụọgụ akara ọnụọgụ (NC), usorokọwara ndị Society of Manufacturing Engineersdị ka “kara akara mmalite nke mgbanwe ụlọ ọrụ nke abụọ na oge mmalite nke ịchịkwa ígwè ọrụ na usoro mmepụta ihe ga-esite n'usoro iwu na-adịghị mma gaa na kpọmkwem sayensị.”
CNC machining malitere dị ka a ọkpọ ọkpọ teepu dabeere na teknụzụ na1940s na 1950stupu ịgbanwee ọsọ ọsọ gaa na teknụzụ analog na dijitalụ na 1960s.
John T. Parsonsa na-ewere nna nke CNC machining. Ọ mepụtara akara ọnụọgụgụ, nke bụ ụkpụrụ a na-ewukwasị ígwè ọrụ CNC. Mana ọbụna tupu Parsons, ndịmachining Usoro e mepụtakwarana 1751. Mgbe ahụ, na 1952, Richard Kegg, na mmekota na Massachusetts Institute of Technology (MIT), mepụtara igwe igwe igwe CNC mbụ.
Kedu ihe bụ isi nke CNC Machining?
Iji ghọta otú CNC si arụ ọrụ, anyị kwesịrị ịghọta ụfọdụ isi echiche.
Nke a na-egosi njikwa aka akụrụngwa akụrụngwa. Ngwaọrụ igwe ndị a sitereegwe ọkandị wel, ndị na-egwe ihe, ndị na-egbu mmiri, naigwe akụrụngwa haịdrọlik.
Ndị a bụ nsụgharị ndị dị ntakịrị nke CNC ma na-emegharị nke ọma maka ịrụ ọrụ na ihe ndị dị nro dị ka wax, ụfụfụ, na plastik. Typedị machining a na - eji ụdị igwe CNC arụ ọrụ iji mepụta obere ngwaahịa, ọkachasị site na ndị ọrụ ntụrụndụ.
Computer-Aided Machining or Manufacturing (CAM) na-eji sọftụwia iji mepụta koodu maka igwe CNC na-agba ọsọ. Iji rụọ ọrụ na usoro CAM, ịchọrọ ihe atọ:
Nke mbụ bụ sọftụwia na - agwa igwe banyere ihe ọ chọrọ ịga.
Ikwesiri igwe nke ichoro ntuziaka.
N'ikpeazụ, ịkwesịrị ịnwe ikike ịhazi nhazi iji gbanwee ntuziaka ka ọ bụrụ asụsụ nke igwe ndị ahụ nwere ike ịghọta.
Nke a bụ asụsụ kọmputa dị mkpa, mana pụrụ iche nke emere maka igwe CNC iji ghọta ngwa ngwa ma mezuo koodu NC (nke a na-akpọkarị G-koodu). Nke a bụ asụsụ onye programmer ji agwa igwe n’emepụta ihe.
Onye na-esote ya bụ onye ntụgharị na-agbanwe G-Code edere maka igwe CNC otu koodu nke igwe CNC ọzọ ga-aghọta ma gbuo.
Olee otú CNC machining Work?
Igwe CNC na-arụ ọrụ site na itinye ntuziaka ha n'ime sọftụwia na-etinye n'ime kọmputa site na iji obere keyboard jikọtara igwe. Usoro CNC ahụ na-arụ ọrụ ndị a haziri ahazi n'ụzọ yiri nke ígwè ọrụ.
Kedu ụdị ụdị CNC Machines?
Igwe CNC dị iche iche na-arụ ọrụ dị iche iche. Offọdụ ụdị igwe CNC bụ igwe igwe, ihe ntanye, ndị na-agagharị agagharị, ndị na-egbu plasma, na ndị na-egbutu LaserJet. Nwere ike ịhụkwu ihe atụ nke ụdị igwe CNC dị iche iche na ihe ha na-emeEbe a.
Gịnị ka CNC Machines Mee?
Igwe CNC nwere ike ịmepụta ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche site na ọtụtụ ihe dị iche iche, gụnyere ọla, plastik, ụfụfụ, na osisi. Ọ bụrụhaala na enwere ike ịkpụ ihe, enwere ike iji ya maka imepụta ngwaahịa na igwe CNC. CNCígwè lathesenwere ike iji ya mee ihe na mkpanaka, eriri na gburugburu. A pụrụ iji igwe igwe CNC hazie elu, ụzọ ụzọ, na ụdị ndị ọzọ na-adịghị mma. Igwe igwe egwu nwere ike inwe oghere:Ebe a.
Nchịkọta CNC bụ ngwà ngwà na-ede G-Koodu nke igwe CNC nwere ike ịgụ. A na-akpọ sọftụwia aKọmputa Na-enyere Aka n'ichepụta (CAM)ma ọ bụIhe eji enyere aka na komputa (CAD). Sọftụwia a bụ ọrụ maka njikwa ọnụọgụ nke igwe CNC. Ọ na - enyere aka ịmepụta atụmatụ nke mmemme kọmputa na igwe CNC nwere ike ịkọwa.
The dị iche iche nke CNC software nwere kpọmkwem ojiji:
Ihe osise kọmputa (CAD):A na-eji nke a iji mepụta atụmatụ 2D na 3D na akwụkwọ ọrụaka.
Kọmputa Na-enyere Aka n'ichepụta (CAM):Na-enye ndị ọrụ ohere ịtọlite ọrụ na ngalaba iji kwado ọtụtụ ọrụ dịka arụmọrụ, ụzọ ngwaọrụ, na ịkpụcha nnwale.
Kọmputa Na-enyere Injinia (CAE):Ndi mmemme ejiri mee ihe na usoro mmepe n'oge nhazi, nyocha, na nhazi usoro.
Kedu uru na ọghọm dị na CNC machining?
Dị nnọọ ka ọ bụla ọzọ na nkà na ụzụ, CNC machining abịa na kpọmkwem uru na ọghọm. Anyị na-ele ụfọdụ n'ime ha n'okpuru.
CNC machining esetịpụ a dị mkpa na-eri uru karịa omenala n'ichepụta na ọ na-ebelata ọrụ-akwụ ụgwọ. Ọ na-ebelata oke nke njehie na nrụpụta. Ọzọkwa, ọ na - eme ka imepụta ihe na - arụ ọrụ dị mfe karịa ka ọ dị kemgbe ọ bụla n'ihi ikike ya iji wepụta ndapụta edo edo mgbe niile.
CNC na-enyekwa mgbanwe na imewe nke na-enye ohere ịmegharị ngwanrọ ngwa ngwa iji mepụta akụkụ ọhụụ ọhụụ ma ọ bụ mezie mmejọ.
Kọ ihe ụfọdụ nke CNC machining
A ihu na CNC machining bụ mbụ set-elu na-eri. Ndị ọrụ ọ bụla nwere ike ịchọ ịgbazinye ego iji nweta teknụzụ CNC. Mana, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịbawanye uru site na CNC machining, enwere ike iweghachi ego ahụ ngwa ngwa.
CNC machining ndụ anya mwere nke infallibility nke kọmputa. Nke a pụtara na ụfọdụ ndị mmadụ na-eji CNC machining system nwere ike ileghara omume nke njehie, na-eme ka ọ dị mfe maka mmejọ ileghara site na-ahụghị. Agbanyeghị, n'iji ọzụzụ zuru oke, enwere ike belata.
N'ikpeazụ, n'ihi na ọ bụ usoro ntinye, CNC machining na-ewepụta ihe mkpofu, nke nwere ike ịnwe ụfọdụ nsogbu na gburugburu ebe obibi. Ka o sina dị, enwere ike itinye usoro njikwa ihe mkpofu iji hụ na mkpofu ewepụtara site n'ichepụta igwe igwe CNC nwere ike imegharị.
Olee otú Dị Mkpa dị CNC machining na Modern Manufacturing?
CNC machining webatara ọhụrụ ụdị nke oge a na n'ichepụta site ya àjà nke ukwuu arụmọrụ na nkenke, si otú àjà ịrịba ndozi n'elu ot ụzọ nke oge a na n'ichepụta. Nke a pụtara na ụlọ ọrụ na-eji CNC machining azọpụta na-akwụ ụgwọ na okwu nke oru na oge, na-amụba profitability na n'ikpeazụ.
CNC emewokwa usoro dịka ịkpụzi (ịgbado ọkụ nke ígwè, ịkwa afụ ọnụ, ọkpọ ọkpọ, na ịcha ọkụ). Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ịgha ụgha n'ihi na igwe ndị ahụ na-agbanwe agbanwe ma nwee ike degharịa ya.
Bụ CNC Mma karịa 3D Printing?
3D ebi akwụkwọ na CNC machining na-ma n'ichepụta ụzọ. Ọdịiche dị oke egwu dị n'etiti ha bụ na CNC machining bụ usoro ntinye, ebe mbipụta 3D bụ usoro mgbakwunye. Nke a pụtara na onye nke mbụ na-emepụta ngwaahịa site na ịbelata ihe sitere na mpempe akwụkwọ mbụ, ebe nke abụọ na-emepụta ngwaahịa site na itinye ihe.
Kedu nke ka mma n’etiti ụzọ abụọ a? Ọ dabere n'ọtụtụ ihe, dị ka ihe eji eme ihe, mgbagwoju anya nke akụkụ ahụ, nka ndị ọrụ, ihe a na-eke, yana echiche ego. Yabụ, otu usoro nwere ike ịdị mma maka ọrụ akọwapụtara na ọ bụghị ọzọ.
Ghọ onye ọrụ igwe CNC
Ndị na-achọ CNC machinists chọrọ ụfọdụ ọkwa ọzụzụ na agụmakwụkwọ ịbanye ọrụ ahụ.
Kedu nkà ị chọrọ iji bụrụ onye ọrụ CNC?
Ndị ọrụ CNCchoro opekempe diplọma nke ulo akwukwo di eluma ọ bụ General Education Development (GED) tupu ha aga n'ihu inweta nkà CNC akọwapụtara nke ọma site na ụlọ akwụkwọ kọleji. GED bụ usoro ule iji chọpụta ma onye ọ bụla nọ na United States ma ọ bụ Canada nwere nkà mmụta agụmakwụkwọ dị elu nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Ndị ọrụ CNC, ndị nwere asambodo site na ụlọ ọrụ dị kaInstitutelọ Ọrụ Mba Maka Nkà Mmụta Ọkpụkpụ(NIMS), nwere uru karịa ndị na-enweghị asambodo.
Ebee ka m nwere ike nweta Ọzụzụ ka m wee bụrụ onye ọrụ igwe CNC?
A na-akpọ ndị mmadụ dere mmemme nke igwe CNC gbasoroNdị Mmemme CNC, mgbe a na-akpọ ndị na-aga ịgba ọsọ nke igwe na ụlọ ahịaNdị na-arụ ọrụ CNC.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbụ onye mmemme CNC, ị ga-etinye oge dị ukwuu dị ka onye na-amụ ọrụ ma ọ bụ na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. Ndị na-arụ ọrụ CNC na-emecha ihe ọmụmụ nwa oge, wee nweta ọtụtụ ahụmịhe ha na ọrụ ahụ.
Ọtụtụ ụlọ akwụkwọ na-enyeCNC kpọmkwem ọzụzụ. Otu n'ime ha bụMahadum Goodwin, ụlọ ọrụ na-akọwa onwe ya dị ka "ụlọ akwụkwọ ndị ọrụ CNC" nke "emebere iji mee ka ụmụ akwụkwọ gbaara ma rụọ ọrụ n'ọhịa n'ime obere oge, na usoro mgbanwe."
Ndi CNC machining ziri ezi maka oru m?
CNC machining bụ vasatail, na ngwa ya metụtara ọtụtụ ụlọ ọrụ, gụnyere aerospace, ọrụ ugbo, iwu, ibi akwụkwọ, n'ichepụta, ndị agha, na njem. Yabụ, ọ bụrụ na oru ngo gị chọrọ oke nkwekọrịta, izi ezi, na arụmọrụ, CNC bụ nhọrọ kachasị mma.
Gịnị bụ ọdịnihu nke CNC machining?
Dị ka teknụzụ dị kaAmamịghe echichenaigwe mmụtaghọọ onye a ma ama, a na-atụ anya na ndị ọrụ CNC 'ga-ewu ewu. Ọ bụ ezie na ụfọdụ nwere ike iche na igwe ọrụ a ọkaibe ga-anapụ mmadụ ọrụ, nke a anaghị abụkarị mgbe teknụzụ na-akawanye mma, n'ihi na ha na-emepụta ọtụtụ ọrụ na mpaghara ọhụụ.
Mmụba ụba na ojiji nke CNC machining ga-enwe elele maka ndị ọrụ na ndị nrụpụta. Maka nke mbụ, usoro anaghị esi ike, nchekwa na-emewanyewanye. Maka nke ikpeazụ a, uru ga-abawanye n'ihi arụmọrụ. Ndị ahịa, n'aka nke ọzọ, ga-erite uru site na ngwaahịa ndị ọzọ.